ढिकुरपोखरीबासीको आन्दोलनले पोखरा बाग्लुङ राजमार्ग २ घण्टा बन्द – Peacepokhara.com
ढिकुरपोखरीबासीको आन्दोलनले पोखरा बाग्लुङ राजमार्ग २ घण्टा बन्द
ढिकुरपोखरी १ चैत । ढिकुरपोखरी गाविसका जनताले आफुहरु महानगरवासी हुन चाहेको बताएका छन् । राज्यपुर्नसरचनाको खाका अनुसार गाविसवासीले सेवाग्रहण गर्दा अपायक पर्ने र थुपै्र झन्झट बेहोर्नुपर्ने भन्दै गाविसबासीले महानगरवासी बन्न चाहेको बताएका हुन् ।
हालको खाका अनुसार ढिकुरपोखरी गाविसलाई अन्नपुर्ण गाँउपालिकामा राखिएको छ । जसको केन्द्र साविक लुम्ले गाविस कार्यालय तोकिएको छ ।केन्द्र रहेको लुम्ले गाविसको साविक कार्यालय अधिकाशं गाविसबासीका लागि अपायक देखिएको भन्दै सोमवारदेखि ढिकुरपोखरीवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।उनीहरुले सोमवारदेखि नै पोखरा बाग्लुङ राजमार्ग बन्द गर्न थालेका छन् ।
यसैविषयमा सोमवार ढिकुरपोखरी गाविसको सर्वदलिय बैठक सम्पन्न भएको छ ।बैठकले गाविसलाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नं. ३४ कायम गर्नुपर्ने एक सुत्रिय निर्णय गरेको नेकपा एमाले ढिकुरपोखरी गाँउ कमिटिका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले बताए । उनले ढिकुरपोखरीलाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नं. ३४ कायम नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै जाने पनि बताएका छन् ।
गाविसबासी पुर्नसरचनाको खाकाले आफुहरुलाई ठुलो पीडा दिएको ठहर गर्दै सघर्षमा उत्र्रन थालेका छन् ।उनीहरुले सघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् । समितिले यहि चैत ७ गतेसम्म दैनिक २ घण्टाका दरले पोखरा बाग्लुङ राजमार्ग बन्द गर्ने निर्णय गरेकोे संयोजक चुडामणी अधिकारीले बताएका छन् ।यति गर्दापनि मागको सुनुवाई नभए यहि चैत ८ गतेबाट अनिश्चितकालिन ढिकुरपोखरी बन्दको आयोजना गरिएको उनले बताए ।
उता गाविस कार्यालय सोमवारदेखि नै अनिश्चितकालिन रुपमा बन्द गरिएको छ । गाविसवासीले आफुहरुका जायज मागमा कुनै बहाना देखाई आलटाल एवं ढिलासुस्ती गरिए कडा सघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नेपाल खाद्य संस्थानको अध्यक्षमा पोखराका केसी नियुक्त
peacepokhara 04 Dec 2014
peacepokhara 08 Jan 2017
Krishna Dawadi 28 Jun 2018